ईसाई धर्म - विकिपिडिया
(क्रिश्चियन धर्म बाट पठाईएको)
ईसाई धर्म (अन्य प्रचलित नाम:मसीही धर्म वा क्रिश्चियन धर्म) एक इब्राहीमी एकेश्वरवादी धर्म हो, जसका अनुयायीहरूलाई ईसाई भनिन्छ। ईसाई धर्मका अनुयायी ईसा मसीहको शिक्षा अनुशार चल्दछन्। ईसाइहरूमा धेरै समुदायहरू छन् । जस्तै:- कैथोलिक, प्रोटैस्टैंट, आर्थोडोक्स, एवानजिलक आदि। ईसाई धर्मका अनुसार जीव हत्या, अनावश्यक हरियो रुखहरू काट्नु ,कसैलाई व्यर्थमा आघात पुर्याउनु, व्यर्थमा पानी बगाउनु, आदि पाप हो। बाइबल ईसाई धर्मको धर्मग्रन्थ हो।
जसको आज विश्वका सबै भन्दा धेरै मान्छे पूजा गर्दछन ति ईसा मसिह को हुन् ?
ईसाई धर्मका अनुशार ईसा मसीह स्वयं परमेश्वर थिए उनि पतन भएका (पापी) सबै मनुष्यहरूलाई पाप तथा मृत्युबाट बचाउनको लागि जगतमा देहधारण गरेर आएका थिए। परमेश्वर आत्मा हुन् उनी पापी मनुष्यहरूलाई हैनकी मनुष्यहरू भित्र भएका पापलाई मेटाउनको लागि एक देह धारण गरेर यो धर्तिमा आएका थिए । उनी यस पृथ्वीका पहिला यस्ता ईश्वर थिए जसले मनुष्यहरू बाँचुन् भनेर पापी, रोगी, मूर्ख र सताइएका व्याक्तिहरूको पक्ष लिए तथा त्यसको बदलामा पापको मुल्य आफ्नो ज्यान दिएर चुकाए। हाम्रा पापहरूको सजाय यीशु मसीहले चुकाएकाले नै हमीहरूलाई पापबाट क्षमा मिल्दछ । यो पापी मनुष्य र पवित्र परमेश्वरको मिलनको मिशन थियो जुन प्रभु यीशुको बलिदान बाट पूरा भयो । एक श्रृष्टिकर्ता परमेश्वर भएर उनले पापिहरूलाई मारेनन् तर पापको इलाज गरे। यो कुरा परमेश्वर पिताको मनुष्यहरू प्रतिको अटूट प्रेमलाई प्रगट गर्दछ। परमेश्वर, शारीरमा आए मनुष्यहरूलाई पापबाट बचाउन यो कुरा यीशु मसीहको परिचय हो। यीशु मसीह परमेश्वर थिए। यसै कुरालाई आजको ईसाई धर्मको आधार मानिन्छ। उनले स्वयं भने म हुँ !!! ईसा मसीह (यीशु) एक यहूदी थिए उनी ४ ईसा पूर्वका समयमा इस्राइल इजराइलको गाउँ बेत्लहममा जन्मेका थिए । ईसाईका अनुशार उनकी माता मारिया (मरियम) कुमारी (वर्जिन) थिईन् । ईसा उनको गर्भमा परमपिता परमेश्वरको कृपाले चमत्कारिक रूपले आएका थिए । ईसाको बारेमा यहूदी नबिहरूले यस्तो भविष्यवाणी गरेका थिए "एक मसीहा (अर्थात "राजा" वा तारणहार) जन्म लिने छ।" कसै कसैले ईसा भारतमा पनि आएका थिए भन्ने मान्छन्। पछि गएर ईसाले इजराइलमा यहूदियहरूका माझ प्रेमको सन्देश सुनाए र भने "म नै ईश्वरको पुत्र हुँ"। यो कुरामा पुराणपन्थी यहूदी धर्मगुरु भड्किए र उनका आज्ञानुशार इजराइलको रोमन राज्यपालले ईसालाई क्रूसमा चढेर मर्नाको प्राणदण्ड दिए। ईसाईका अनुशार यसका तीन दिन पछि ईसाको पुनरुत्थान भयो अथवा ईसा पुनर्जीवित भए। ईसाका उपदेश बाइबल का नयाँ नियममा उनका शिष्यहरू द्वारा रेखांकित गरिएका छन्।
पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरका तेश्रा व्यक्तित्व हुन् जसको प्रभावमा व्यक्ति आफु भित्र ईश्वरको महसुस गर्दछ। यो ईसाको चर्च एवं अनुयाईहरूलाई निर्देशित गर्दछ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=ईसाई_धर्म&oldid=791464" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १२:३३, १९ अप्रिल २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।